Banyere Anyị - Kingswel Machinery Co., Ltd
WDY usoro Single ojii
WDY usoro Ugboro abụọ ojii
kingswel ígwè bụ otu n'ime ndị kasị mmepụta bases nke igbu ịkpụzi ígwè na ụwa. The ụlọ ọrụ na-majoring na ubi nke emebe, n'ichepụta ma na-ere ihe nile ụdị igbu ịkpụzi akụrụngwa nke na-adabara n'ichepụta oghere plastic ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka plastic karama, eso, orù, igbe, akpa, e ji egwuri egwu, plastic trays, ibu-nnukwu plastic orù etc na-arụ site 0.01-5000 liter. Nnukwu 1000-liter oghere igbu-ịkpụzi igwe bụ ebe a. Na 60% nke na-arụ nke ndị ahịa, iche iche iche iche nke ụlọ ọrụ nwere worldwidely eresị Southeast Asia, Europe, America, Arabia mba wdg Allthe mmiri nke ngwaahịa na ha agafeela asambodo nke American Mankeumman, CSA ma ọ bụ IS09000 (2000) na na-eme ka ngwaahịa n'aka na-kasị mma ngwaahịa mba.
Anyị na-esi ọnwụ na nkwenkwe, na ihe nile ike ime na mbụ na klas imewe na iche iche iche iche nke àgwà na-ekwe nkwa, na n'ụzọ zuru okè na-egosipụta na mmekọrịta dị n'etiti anyị na ngwaahịa na ndị mmadụ, na ya ime mgbanwe iji kwekọọ oge.
Ihe anyị na-na-na-etinye uche na ọ bụghị nanị ndị nkeji nke ụgbọ imewe ma ọ bụ akụkụ nke ọrụ, ma anyị na-agbalị kasị mma anyị ọkà mmụta sayensị ikpokọta mmụọ nke gị ụlọ ọrụ taa na echi.
Ọ bụla ngwaahịa na-eme atụmatụ site na mmebe maka gburugburu ebe obibi àgwà nke iji na-emekarị. Anyị nwere nka nnyocha na-amụ ngalaba na ahịa ọrụ net gburugburu obodo, na-na elu na ngwá na anya; na anyị nwere ike mgbe ọ bụla ịghọta ohere na ngwa ngwa inye ndị kasị mma ọrụ gị.
N'èzí anya nke factory